काठमाडौं । अभिनेता निखिल उप्रेतीले देशलाई प्रेम गर्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा आह्वान गरेका छन् । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर एकीकृत शक्ति नेपाल घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उप्रेतीले देशमाथि घा’त गर्ने दु’श्मनहरुको प्र’तिकार गर्न अपिल गरे ।नकारात्मक शक्ति बढ्दै जाँदा नेपालको राजनीति आजको अवस्थामा पुगेको उप्रेतीको भनाइ थियो । ‘आज राजनीति गर्ने ती नेताहरु कोठा कोठामा पार्टीको घोषणा भइरहेको छ । तर मिल्न सक्ने क्षमता साहस धेरै कमले देखाउन सक्छ । जब देश वि’रामी हुँदा देशको उपचारका लागि मिल्न सक्दैनौ भने ती काल्पनिक र कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहहरुले भोलि के गर्न सक्लान ?’उनले प्रश्न गरे, ‘तिनीहरु कसरी फरक हुन सक्छ कि अहिले देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरु वक्तव्य पल्टाएर हेरौं । आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, कार्यकर्ताभित्रको तिक्तता र देशभित्र उनीहरुले जानेको एउटै खुबी हो आफ
उडुसको टोकाइबाट रातभर सुत्न नपाएकाहरुले यसबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ । उडुसको टोकाइबाट शरीर चिलाउने, सुन्निने तथा एलर्जी हुनुका साथै विभिन्न रोगहरुसमेत लाग्नसक्छ । उडुस सानो र छिट्टै लुक्ने परजीवी भएकाले यसलाई निर्मुल पार्न एकदमै कठिन हुन्छ । एउटा माउ उडुसले आफ्नो जीवन कालभर पाँचसय अण्डा पार्छ । यसरी गुणात्मकरुपमा फैलिने जाँदा यसले पूरै घर, छिमेकलाई समेत प्रभावित बनाउँछ । यसको नियन्त्रणमा जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै सास्ती भोग्नुपर्ने भएकाले बेलैमा सबै चनाखो हुनु जरुरी छ । उडुसले शरीरको कुनै पनि भागमा सजिलैसाग टोक्न सक्छ । यस्ता विषालु किराबारे सोच्दा मात्र पनि कतिपयलाई राति निद्रा नै पर्दैन । तिनको रोकथाममा जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति नै प्रकोप बढ्छ र नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुन्छ । उडुस जस्ता विषालु कीराको बारेमा सोच्दा मात्र पनि कतिपयलाई राति निद्रा नै पर्
काठमाडाैँ । ३७ वर्षीया अफ्रिकी महिलाले एकैपटक १० बच्चाहरू जन्माएकी छन् । गर्भावस्थामा उनले विश्व कीर्तिमान ताेडेकी छन् ।दक्षिण अफ्रिकाको गोटेंग प्रान्तकी एउटी महिलाले एकै साथ १० बच्चाहरूलाई जन्म दिएर विश्व कीर्तिमान बनाएकी छन् । महिलाको नाम गोसेम थामरा सिथोल हो । गोसेमले ७ जुनमा ७ बाबु र ३ नानीहरू जन्म दिइन् । यससँगै ३७ वर्षीय गोसेमले माली निवासी हलीमाको विश्व कीर्तिमान ताेडेकी छन् । गत महिना मोरक्कोमा नौ बच्चालाई जन्म दिएर हलीमाले विश्व कीर्तिमान भंग गरेकी थिइन् ।गोसेमसँग पहिले नै-वर्षका जुम्ल्याहा बच्चाहरू छन् ।चिकित्सकहरूले याे एकदमै दुर्लभ घटना भएकाे बताएका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका-७ बिपी राजमार्गअन्तर्गत कटुञ्जेस्थित सडकमा गुडिरहेको मोटरसाइकलमा आज बिहान माथिबाट खसेको पहिरोको ढुङ्गा लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।काठमाडौंबाट जनकपुर जाँदै गरेको ज.८.प ७४९० नम्बरको मोटरसाइकलमा लाग्दा चालक र र पछाडि सवार व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए। प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई धुलिखेल अस्पताल पुर्‍याएको थियो।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाका अनुसार मृत्यु हुनेमा महोत्तरीको रामगोपालपुर घर भएका वर्ष २८ का सरोजकुमार साह रहेका छन् । मोटरसाइकल चालक साहको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । साहको शव अस्पतालमा नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोही मोटरसाइकलका पछाडी सवार रहेका धनुषाको रामानन्दचोक घर भएका वर्ष ३० का सतीशकुमार साहको भने घाइते भई अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले ज
२२ रुपैयाँमा नै छानी-छानी गर्लफ्रेण्ड !
मानिसहरुले व्यापारको लागि जस्तो पनि उपाय अपनाउन सक्छन् । हरेक मानिसले आफ्नो व्यापार राम्रो होस् भन्ने चाहान्छन् र त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि तौरतरिका अपनाउने गर्छन् ।आज हामी तपाइलाई चीनको एक अनौठो घटना बताउदैँ छौ ।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**, यो घटना सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ तर मुलुक चीनको सत्य घटना हो ।चीनको एक सपिङ्ग मलले ग्राहकहरुलाई भाडामा ग्रर्लफ्रेण्ड उपलब्ध गराइदिन्छ । यदि तपाईँले एउटा सर्त मान्नु भयो भने ती केटीहरुसँग २० मिनेट समय बिताउन सकिन्छ ।२२ रुपैया अर्थात ११ फिलिपिनो पिसोमा पाइने ती युवतीहहरुसँग तपाईले मज्जाले समय बिताउन सक्नुहुन्छ ।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**, उक्त सपिङ्ग मलको यो अफरपछि त्यहाँ युवाहरुको निकै भिड लाग्न थालेको छ । दक्षिणी चीको सहर हुआनमा वाइटैलिटी सिटी नामको सपिङ्ग मलमा यो अफर शुरु गरिएको हो ।यहाँ १५ सुन्दर युवतीहरु भाडामा राखिएको
अनलाइनमा किनियो आइफोन, घरमा डेलिभरी भयो लुगा धुने साबुन !
काठमाडौं । आजभोलि अनलाइन शपिङको जमाना छ । किनमेलको लागि बाहिर जाँदा समयको बर्बाद र शारीरिक कष्ट पनि हुने भएकाले नेपालमा पनि अनलाइनमार्फत् शपिङ गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । घरमै बसीबसी अर्डर गरेको सामान घरमै आइपुग्छ भने किन घुम्नु बजार–बजार ? यस्तै सोचेर एक व्यक्तिले अनलाइनमार्फत् आईफोन अर्डर गरे । तर घरमा डेलिभरी भयो लुगाधुने साबुन ।यस्तो घटना नेपालमा भएको भने होइन । भारतको मुम्बईमा भएको हो । २६ वर्षीय एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले अनलाइन शपिङ साइट फ्लिपकार्ट मार्फत् आइफोन –८ अर्डर गरेका थिए । त्यसको लागि पैसा पनि अनलाइनमार्फत् नै भुक्तानी गरे । तर, घरमा आइदियो आइफोनको सट्टा लुगा धुने साबुन । तबरेज मेहबुब नाग्रलीका अनुसार उनले आईफोन९८ को लागि ५५ हजार रुपैयाँ अनलाइनमार्फत् नै भुक्तानी गरेका थिए । तर जनवरी २२ तारिकमा पानभेलस्थित निवासमा डिटर्जेन्ट साबुन डेलिभरी भएको दावी उनको छ ।उनले आफूला
हरी उदासी प्रतिमा तामाङ र सबिता भट्टराईको घरायसि झ,गडा अहिले सबैको चासो बिषय बनेको छ । अहिले प्रतिमा र हरि उदाशी घरभित्र झ,गडा गरेको र हात हा,लाहाल गरेको भिडियो सामग्री बाहि`रिएको छ । प्रतिमाको कोठामा केही नभएको र खाने चामल समेत सकिएको र छोराछोरीलाई नुनसँग खाना खुवाएको र बसिरहेको कोठाभाडा समेत नतिरेको भन्ने आरो`प प्रतिमाले हरि उदाशी माथी लगाएकी छन् । हरी उदासी कि अर्की श्रीमती सबिता भट्टराईको यता एउटा छोरा समेत छ।उनलाई श्रीमानले खासै न,राम्रो वि,भेद गर्दै नआएको तर ए,क्कसी मोबाइलमा हेर्दा अनलाइन मिडिया भरी आफ्नो श्री`मानको क,र्तुत थाहा पाउँदा आफू श,क भएको उनी बताउँछिन्। हरि उदाशीले भने आफूले अहिले गरेको ग,ल्ती मह,सुस गर्दै मिलाएर राख्ने पनि बताएका छन्। हरि उदासीको बिषयलाई लिएर अहिले विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्त्व तथा अभियान्ताहरूले अहिले विभिन्न पक्ष तथा विप,क्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरि
काठमाडौं । बैङ्किङ्ग कसुरको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ईलामको सूर्योदय नगरपालिका घर भएका २३ वर्षीय विशाल रेग्मी छन् ।जनकपुरबाट बुद्ध एयरको उडानमार्फत काठमाडौँ आएका रेग्मीलाई आन्तरिक टर्मिनलबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जानकारी दिएको छ । विशालले ललितपुर बस्ने विनन्जय थापालाई दिएको कुमारी बैङ्कको चेक बाउन्स भएपछि थापाले प्रहरीमा उजुर गरेका थिए । २०७६ भदौमा चेक दिएर फरार भएका रेग्मीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा पठाइने महाशाखाले जनाएको छ । यो पनि, जाग्रामसहित पूजा आराधना गरी मनाइयो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीवैदिक सनातन धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व सोमबार देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना एवं रात्रिमा जाग्राम बसी श्रद्धा–भक्त
एजेन्सी । संसारमा विचित्रका घटना हुन्छन् । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सकिदैन । तर विश्वभरका विभिन्न विशेष स्थानमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेरामा कै द भएका यस्ता भिडियोले तपाईलाई अचम्म बनाउन सक्छ । यहाँ त्यस्ता भिडियो प्रस्तुत गरिएको छ जुन तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । यि भिडियो हेरेर तपाईलाई अविश्वास पनि लाग्न सक्छ । तर सीसीटीभी क्यामेरामा कै द भएका यि भिडियो विभिन्न मुलुकका हुन् । सबै भन्दा अनौठो यो भिडियोमा के छ भने । केही मोटरसाइकल राइडर मोटरसाइकलमा कतै गइरहेका हुन्छन् । जंगलको वाटो हिड्दै गर्दा उनीहरुले आफ्नो मोटरसाइकल अगाडी एक जना नि र्व स्त्र महिला अगाडी दौडिरहेको देखे । केही वेर उनीहरुले ति महिलालाई पच्छ्याए तर पछि त्यो महिला झाडीमा प्रवेश गरेको देखियो । सबै जना जम्मा भएर उनलाई खोज्ने कोशिष गरे । क्यामेर लिएर उनीहरु पनि झाडीमा गए । तर जति खोजे पनि उनीहरुले फेला पार्न सकेनन् ।
चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको डिर्भोष भएको छ । धेरै दिनदेखि उनको डिभोर्सको चर्चा टिकटकमा व्यापक भएपनि उनका पूर्वपतिले आफुहरुले खुशी साथ अलग भएको जानकारी दिएका छन् । स्मारिकाका श्रीमान विवेक अधिकारीले हिजो टिकटकमै लाइभ आएर आफूहरुको सम्वन्ध अन्त्य भएको बताए पनि अन्त्य हुनुको कारण भने खुलाएनन् । आ–आफ्नै हिसाबले करियर अगाडि बढाउने भनेर आफुहरु छुट्टिएको र एक अर्कालाई अहिले पनि सम्मान गर्ने उनले बताए । सेलिब्रिटी भइसकेपछि श्रीमानलाई छोडेको आरोप आएपछि उनले यस्तो आरोप नलगाउन उनले आग्रह गरेका छन् । ‘नाम र पैसा कमाएपछि श्रीमानलाई छोडिस भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो बिलकुल गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत आरोप लगाउन बन्द गरिदिनुहोला विवेकले भने ।झापा बुधबारे निवासी स्मारिका र विवेकबीच केही वर्षअघि ‘प्रेम प्लस मागी’ बिहे भएको थियो । नजिकै घर भएका दुवैले एक–अर्कालाई मन पराएपछि परिवारको सहमत
उपचारका क्रममा प्रचण्डको निधन, सिंगो नेपाल शोकमा डुब्यो (2328)